Talata 10 Septambra 2019. – FJKM
Talata 10 Septambra 2019.
2 Korintiana 4.16-18 ; 5.1-10
Manana hery tsy hay tohaina mandrakariva isika noho ny amin’ny finoana velona an’i Jesoa Kristy satria:
1-Manana fanantenana ny mandrakizay ao amin’i Kristy
Tsy mba ketraka noho izany isika na dia feno fahalovana aza ny tany . « Ary tsy ketraka izahay , fa na dia mihalevona aza ny toetray ivelany , dia havaozina isanandro isanandro kosa ny toetray anatiny » (4.16). Velona ao amin’ny fanantenana ny mandrakizay isika . Mitrakà mijery ny tsy hita dia ilay mandrakizay ao amin’i Kristy (4.17,18).
2-Tsy manana tahotra ny fahafatesana
Toy ny tranolay itoeran’ny fanahintsika ihany ity vatana ity amin’ny maha- tranolay azy dia mora rava , tsy maharitra ela , mandalo … Fa isika mpino koa dia manana trano maharitra mandrakizay izay tsy nataon’ny tànan’olombelona fa voarafitr’ Andriamanitra (5.1), ny tsy manana izany trano izany dia matahotra ny hila amin’ity trano lay ity . Mety misento koa isika rehefa hiala eto satria endahina amin’ny mahazatra sy mahatamana , nefa aza matahotra (5.2-5).
3-Mandeha amin’ny finoana isika fa tsy fahitana
Tsy manana finoana marina ny olona mila famantarana sy fahitana na fahagagana . Anisan’ny voamarika teo amin’ny Jiosy izany nefa tsy tsara (1 Kor 1.21/Jao 4.48/ 6.26) . Tandremo sao voafitaka fa maro ny toy izany . Vakio Apo 13.11-18/16.13-15/Mat 24.5/Mar 13.6/ Lio 21.8) . Miandry ny fotoana hihaonantsika mivantana amin’ny Tompo isika (Jao 20.29).